အတို အနက်ရောင် လေးနဲ့ မျက်လုံး ပြူးသွားမဲ့ ဂေါက်ကွင်း ထဲမှာ အမိုက်စား ဖက်ရှင် နဲ့ ထိထိ မိမိ လှလွန်းနေ တဲ့ မျက်ဝန်း…. – Shwe Naung
အတို အနက်ရောင် လေးနဲ့ မျက်လုံး ပြူးသွားမဲ့ ဂေါက်ကွင်း ထဲမှာ အမိုက်စား ဖက်ရှင် နဲ့ ထိထိ မိမိ လှလွန်းနေ တဲ့ မျက်ဝန်း….
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ မြင်သူ တိုင်းငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်မျက်ဝန်း ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောက ကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ် အများအပြားရဲ့
အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုရရှိထားတဲ့ သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမည် တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည် နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စား ပုံတွေနဲ့ ညို့ အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးဖြစ်တာ ကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာမှာ ရေပန်းစား
လူကြိုက်များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမိုက် စားပုံရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိ တာတွေ့ ရပါတယ်။
ပုံလေး တွေတိုင်း မှာ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လန်းလွန်း နေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ခပ်ချေချရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးကို “ကိုကိုဂေါက်ကွင်း ကြီးထဲက ဂေါက်သီးမလေး ” caption လေးတဲ့ တင်ပေး လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊
မာ်ဒယ်မျက်ဝန်းရဲ့ အလှပုံရိပ် လေးတွေကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှ ဝေပေး လိုက်တယ်နော်။ကြည့်ရှုအားပေးသောချစ်ပရိသတ်ကြီး လည်း သာယာပျော် ရွှင် သောနေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
နှာခေါင်းစီးလေး ဝတ်ပြီးကြည့်ပါ ဆိုပြီး သူမရဲ့ ကိုယ်လုံးတီး ပုံလေးတင်ပေးလိုက်တဲ့ သဇင်ဦး